Kwesịrị Ndị na-ede blọgụ idozi mmejọ ha? | Martech Zone
Enwere nnukwu mkparịta ụka na Ndị Cranky Geeks nke tụbara na TWIT n’izu a nke dị m nso na ezigbo ya nye m nkwanye ùgwù maka ndị nta akụkọ. Ndị na-ede blọgụ abụghị ndị odeakụkọ n'echiche ọdịnala nke okwu mana anyị na- ndi oru nta akuko mgbe ha lere ya anya n’ile ha.
Ndozi dị mkpa ma kwesiri ịme ya, mana ọ dabere na mmejọ emere.
Ederede ochie ka 'dị ndụ' na nsonaazụ injin nchọ ma enwere nkọwa metụtara (oge ụfọdụ) na ozi a tụlere. Dvorak na-eche na ọ bụ nzuzu ịlaghachi ma mee ndozi na ochie posts… o kwenyere na ọ wụfuru mmiri ara ehi na n'ihi na ọ dịghị onye na-agụkarị ya, ọ gafeela ma mee ya na onye ọrụ kwesịrị ịga n'ihu. Leo na-ekwusi ike na ọ na-amanye idozi post ahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na okwu ọ bụla nwere ike ịdị ka ọ ga-ekewapụ na ndezi mgbe emechara ya. Ekwenyere m Leo!
Nweta - ọ bụrụ na atụ uche m itinye ihe onyonyo, see okwu, edemede na wdg. M ga-emezi ndezi ozugbo ozugbo agbanyeghị afọ post. Ọ dị mkpa (ma ọ bụrụ na ọ bụghị iwu akwadoro) ka anyị hụ na anyị na-enye kredit ebe akwụmụgwọ tozuru.
Njehie kwuru site na Nkwupụta - mgbe onye na - agụ blọgụ m chọtara mmejọ na post ahụ, m ga - emezigharị mmejọ ahụ ma zaghachi site na nkwupụta na edozigharị ya yana ole m nwere ekele maka ozi ha nyere. Nke a na-enye ihe ndekọ ederede nke mgbanwe ahụ yana na-egosi ndị na-agụ na m abụghị naanị mmadụ, mana m na-eche maka etu ozi m si bụrụ eziokwu.
Njehie m na-ahụ - M ga-eji akara mkpado na HTML gosipụta njehie na mgbazi. Na iku mkpado dị mfe iji.
Ọzọkwa, nke a bụ n'agbanyeghị afọ post. Achọrọ m ka ihe m dere bụrụ nke ziri ezi, chọọkwa ka ndị na-agụ ya hụ mgbe m mehiere ma mezie ya. Ihe niile gbasara ikwere ntụkwasị obi - ikweta mmejọ gị bara uru.
Asụsụ na Asụsụ - Mgbe m mere nchoputa na m mehiela ụtọ asụsụ (ọ na-abụkarị onye ọzọ ga-agwa m), m ga-eme ndezi ma anaghị m egosipụta ya. Ebe ọ bụ na nke a agbanweghị izi ezi nke post blọgụ, ọ naghị adị m mkpa igosipụta oke egwu m nwere na ụtọ asụsụ na mkpope. Ka emechara, m mgbe nile na-agụ akwụkwọ na-ama na-aghọta nke a!
M na-agbazi mmejọ ọ bụla achọtara m ma ọ bụ nke ndị na-agụ akwụkwọ m tụrụ m aka. Ikwesiri, kwa! N'adịghị ka onye nta akụkọ na-ebipụta akwụkwọ, anyị nwere ikike dị elu n'ịdezi n'ịntanetị nke na-achọghị ka anyị 'bipụta' akwụkwọ ozi.
Ekwetaghị m na ọ dị mkpa ịpị ihe edetu na blọọgụ na-esote ịkọwa dezie na ọkwa gara aga (dika John markoff aro na Cranky Geeks show!), gingde blọgụ bụ mkparịta ụka na ụdị nkwukọrịta. Ndị na - agụ ya ga - anabata mmejọ… belụsọ na ha agaghị emezi ya kpamkpam.
Ọ bụ banyere ịtụkwasị obi, ikike, na izi ezi na m na-eme ya omume iji dozie njehie nke blog m. Otu blọọgụ enweghị ike ọ bụla belụsọ ma ndị na - agụ ya kwenyere na ozi dị ebe ahụ ma zoo ya. Ekwenyere m na ọ bụrụ na ị leghara idozi mmejọ gị, ntụkwasị obi gị ga-adalata - dịka ọnụọgụ ndị na-agụ akwụkwọ gị nwere na ọnụ ọgụgụ saịtị ndị na-ekwu maka nke gị.
Tags: ịde blọgụ atụmatụebookebook atụmatụọdịda peeji nke njikarịchangwọta peeji nkendu ndu ọphumultidomain
Na-ewepu Comcast si Blacklist
Jul 19, 2008 na 11:23 PM
M nọnyeere gị m na-agbazi njehie m. Enweghị m ike iguzo ịhapụ ha mgbe m hụrụ ha!
Jul 19, 2008 na 11:32 PM
Anyi kwenyere na e kwesiri idozi ndudue ASAP that bu na nihi onye nkuzi bekee nke ulo akwukwo sekọndrị m kwara ya n'isi? Ee, mana ọ bụkwa n’ihi na ọ bụ ihe kwesiri ekwesi, imho.
Ihe ntanetị gị na-amasị m… Ọ masịrị m na ha dị mkpụmkpụ, dị nkenke ma na-enye aka. Daalụ maka onyinye gị NA ekele maka iwetara anyị ọkwa ọhụrụ na Twitter!
Jul 20, 2008 na 12: 34 AM
Ekwenyere m na ị kwesiri idozi mmejọ gị. Daalụ maka ịkọwa HTML strikethrough. Kedu koodu iji dọpụta nke ahụ?
Jul 20, 2008 na 12: 57 AM
HTML bụ okwu ị chọrọ iku
Jul 20, 2008 na 9: 04 AM
Emelitere m post na ihe atụ. 🙂
Jul 20, 2008 na 4: 16 AM
Douglas: Ekwere m maka njehie ndị mere eme. Ọ bụrụ n ’ịhapụ ha, ị nwere ike ime ndị na - agụ akwụkwọ n’ọdịnihu nsogbu dị njọ. OTOH, ọ bụrụ na ị were ọnọdụ igbe ncha ma kpọọ gị na kapeeti na ya, echere m na ọ bụ enweghị nkwanye ùgwù imegharị akụkọ ihe mere eme. JMTCW agbanyeghị.
Jul 20, 2008 na 5: 48 AM
Egwuregwu m na-arụ n'ụlọ maka njehie njehie na njehie na-emehie - ọ na-eme ka anya m na-agba agba, dịka ọmụmaatụ, iji hụ ngosipụta WWSGD:
Ọ bụrụ na ọhụrụ gị ebe a, lelee ndepụta m!
BGH 'N'ezie, nke ahụ adịghị mkpa na posts ochie, mana ọ bụ ihe mbụ batara m n'uche.
Aga m agbazi ozi m oge niile ọ dị mkpa - ọ bụ akụkụ nke ịbụ onye na - ede blọgụ nwere ọrụ.
Obi ụtọ Sọnde, Barbara
Jul 20, 2008 na 9: 01 AM
Daalụ Barbara! Atụrụ m anya na ị nwere ike ịnagide (ma tụọ aka) mmejọ nke ụtọasụsụ.
Naanị m na-amata ha mgbe ihere nke onye dịka gị onwe gị na-ejide ha ma mee ka m mara. Ihere na-eme m mgbe niile n’ihi na amaara m nke ọma na agụọla akwụkwọ - ọ bụ naanị ntụpọ nke m.
Site na iji nlezianya, omume na nyocha, egosila m oke ọnụ ọgụgụ nke njehie, agbanyeghị. O bu otu n’ime ihe n’eme m ji ju onwe m n’edemede!
Jul 20, 2008 na 8: 56 AM
M na-emezi mmejọ m dịka ị kwuru mana nke a na - eduga ajụjụ ọzọ dị mkpa:
Gosiri na ị na-ezighi ezi nsogbu na peeple's kommints?
Jul 20, 2008 na 9: 03 AM
Nnukwu ajụjụ m ga-ekwenye n'ụzọ zuru ezu na agbazigharị mpepe okwu na ụtọ asụsụ na nkọwa, kwa! N’agbanyeghi na ‘esi n’aka onye ọrụ’, ọ ka dị na blog. Dika odi, o nwere otu uru ma nweta otu nlebara anya. Anaghị m eme ihe ọ bụla na-agbanwe isiokwu mbụ nke ozi ahụ, agbanyeghị!
Jul 21, 2008 na 4:49 PM
Ọ bụrụ na ọ bụ ụtọasụsụ ma ọ bụ nsụpe - ka à ga-asị na enwere m nke ọ bụla n'ime ha! - Aga m edozi ya n’akpaghị anya na ya.
Mana ọ bụrụ na ọ bụ njehie ọdịnaya, echere m na ekwesịrị idozi ya. Ntinye ntinye akwụkwọ bụ akụkọ ihe mere eme nke ụdị. Ọ bụghị akwụkwọ akụkọ a na-agụ ma tụfuo. Enweghi ike idozi njehie na ntinye ntinye. Blọọgụ, dị ka ndị ọzọ na Internetntanetị, na-adịgide adịgide, ma ekwesịrị idozi ya iguzo, nke ọma, n'ụzọ ziri ezi.
Kedu a na-agbazi ha dịịrị onye blogger ahụ. N’onwe m, a ga m emezi njehie ahụ, ma ọ buru oke ibu, kwuo na m meziri ya. Ọ bụrụ na ọ bụ obere ihe, dị ka ịnweta obodo na-ezighi ezi, aga m edozi ya na-enweghị ọkwa.